Quick Export dia tonga ao amin'ny Premiere Pro ary vaovao bebe kokoa amin'ny After Effects | Famoronana an-tserasera
Amin'ity volana septambra ity isika dia manana vaovao mahaliana mifandraika amin'ny horonan-tsary sy ireo fampiharana Adobe roa: Premiere Pro ary After Effects. Fandaharam-potoana roa ilaina amin'ny fanitsiana horonan-tsary izay mampiditra endri-javatra vaovao hanatsarana ny zavatra niainanao.
Manana indray isika Adobe Sensei manao ny zavatra hitehirizany fotoana ary ny ezaka ho an'ireo matihanina sy ireo mpankafy amina fandaharana marobe toy ny Premiere Pro. Andao hojerentsika hoe inona ireo vaovao roa Adobe ireo amin'ity volana ity.
Voalohany dia miresaka momba ny Premiere Pro sy izany izahay vaovao amin'ny beta antsoina hoe Quick Export ary izany dia manolotra antsika avy amin'ilay bara ho an'ny rindrambaiko ambony ihany amin'ilay programa, ny fidirana amin'ireo toe-javatra fanondranana tena ampiasaina. Izany hoe hanana ny fahafaha-mampiasa ny fikirana codec H.264 amin'ny lisitra izahay mba hampihenana ny haben'ny horonantsarinay.
Ho an'ilay ampahany izay miankina amin'ny Adobe Sensei azontsika atao ny miantehitra amin'ny Scene Editing Detection, ary ny anarany ihany no manazava azy. Izany hoe, mahita fanapahana sy fanovana amin'ny sehatra iray miaraka amin'ny fianaran'i Sensei amin'ny milina izy. Ary farany manana Premiere Pro miaraka amin'ny HDR izahay amin'ny fampielezam-peo amin'ny Rec2100 HLG HDR.
Ao amin'ny After Effects ny vaovao dia mifandraika amin'ny fanatsarana ny traikefa 3D amin'ny programa. Ny «gizmos» hifehezana ny seho amin'ny 3D izao dia isika mamela anao hivezivezy haingana kokoa sy amin'ny fomba intuitive kokoa; refy, apetraka ary ahodino sosona miaraka amin'ny mpitari-dalana ahafahantsika misambotra ny halaviran'ny namindrantsika zavatra.
Manana fanatsarana koa izahay amin'ny fitaovana fanaovana fakan-tsary hivezivezy na vilany miaraka amin'ireo fitambarana manan-danja izay azontsika ampanjifaina. Tsy eto amin'ny vaovao ihany, fa manana ny fahaizana manampy fakan-tsary marobe amin'ny fomba fijery samihafa.
Tian'i Adobe koa izy manatsara ny fahombiazana amin'ny fantsom-panafody voadika izao ho an'ny GPU, ny fanatsarana ny OpenEXR dia mitombo hatramin'ny in-3, ny effets haingana kokoa ho an'ny plugins audio sy VST3, ary ny hafainganana dia nampitomboina avo roa heny tamin'ny endrika multicam ProRes.
Raha fintinina, a fanatsarana traikefa ho an'ny sasany workflows amin'ny Adobe Premiere Pro sy After Effects; mitarika anao amin'ny vaovao izahay borosy nataon'i Keith Haring miaraka amin'ny Adobe ary tokony tsy ho diso anjara ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Adobe manavao ny Premiere Pro sy After Effects miaraka amin'ireo vaovao ireo